Allgedo.com » 2011 » October » 03
Home » Archive Daily October 3rd, 2011 Xildhibaan Cawed Axmed Cashara oo Ku Eedeeyey Xukuumada C/weli Gaas inay sii luminayso xaduuda badda Soomaaliya Oct 3, 2011 Gudoomiyaha gudiga warfaafinta baarlamaanka KMG ah ee Somalia xildhibaan Cawed Axmed Cashara oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Toronto ee dalkasi Canada ayaa ka hadlay qodobo dhowr ah oo uu ku dhaliilayo sida ay xukuumada KMG ah ee Somalia ee uu madaxda ka yahay Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay uga hadashay arinta bada soomaaliya ee lagu soo xad gudbay isla markaana ugu baaqay umada soomaaliyeed... Ururka Nabadeynta iyo Isku xirka Dhalinyarada Gobolka Gedo oo daraasad ku sameeyay abaaraha gobolka Gedo Oct 3, 2011 Read More → WAR DEG DEG AH: Alshabaab oo goor dhow dagaal kula wareegay Magaalada Dhuuso mareeb. Oct 3, 2011 Wararka naga soo gaaraya Magaalada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in goor dhow halkaasi dagaal culus kula wareegeen Ciidamada Xarakada alshabaab oo weerar culus ku qaaday.
Dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey in gudaha magaalada ay soo galeen Ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa Xarakada Alshabaab kuwaasoo dagaal culus akdib u suuragashay in ay la wareegaan magaalada Dhuuso mareeb ee gobolka... Guddoomiyaha SYDC oo magacaabay guddiyada fulinta iyo sharciga Oct 3, 2011 Guddoomiyaha Jaaliyadda dhallinyarada qurbo-joogta Soomaaliyeed ee dalka Kenya (SYDC) wuxuu magacaabay xubno ka kooban labada guddi ee fulinta iyo sharciga ee maamulkiisa cusub.
Cabdullaahi Xareed Axmed guddoomiyaha SYDC oo dhawaan uun xilka kala wareegay guddoomiyihii hore Xuseen Axmed Maxamed (Sanka) ayaa ku dhawaaqay guddi fulineed oo ka kooban sideed xubnood iyo mid sharci oo ah shan xubnood.
Guddiga... Hablo Soomaali Maraykan ah oo maanta lagu wado in Maxkamad lagu soo taago dalkaasi. Oct 3, 2011 Laba haween Soomali Maraykan ah ayaa lagu wadaa in maantay maxkamad lagu soo taago dalkaasi, kadib markii lagu eedeeyey in ay taageeraan Alshabaab oo dagaalo kula jira dowladda KMG Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM.
Maxkamada dambiyada magaalada Mineapolise ee dalka Maraykanka ayaa la filayaa in maantay la horkeeno Aamina Faarax Cali oo 35 jir ah iyo Xaawo Maxamad Xasan oo 64 Jir ah kuwaasoo lagu soo... Dowladda Kenya oo sheegtay inay la xaajoonayso Al-shabaab. Oct 3, 2011 Dowladda Kenya ayaa sheegtay in Xarakada Al-shabaab ay gacanta ku hayaan haweenaydii u dhalatay dalka Faransiiska, isla markaana ay Al-shabaab kala xaajoonayaan sidii haweeneydaas loo sii deyn lahaa.
Waxa ay dowladdaKenyasheegtay inay samaysay Guddi wadaxaajood la gala Al-shabaabka heysta haweeneyda u dhalatay wadanka Faransiiska ee dhawaan laga afduubtay gudaha dalkaKenya.
Saraakiil dhanka amaanka... Baarlamanka KMG Soomaaliya oo maalintii labaad ka doodaya Xadeynta Badda. Oct 3, 2011 Xildhibaanada Baarlamanka KMG soomaaliya ayaa maanta mar kale ka doodaya kullan ku aadan Xadeynta Badda Soomaaliya, iyadoo kullanka uu ka dhici doono Xarunta golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho.
Kullankan ayaa ah mid daba jooga kullankii shalay ay yeesheen mudanayaasha Baarlamanka KMG soomaaliya, kaasi oo looga hadlayay arrinta Xadeynta Badda intii uu socdayna kullanka ku soo dhammaaday natiijo la’aan.
In... Dagaalo ka dhacay gobolka Karkaar oo qasaare fara badan ka dhashay. Oct 3, 2011 Wararka ka imaanaya Tuulooyin hoostaga Degmada Rako ee gobolka Karkaar ayaa sheegaya in halkaasi dagaal culus ku dhex maray Maleeshiyo beeleed uu ka dhacay halkaasi.
Tuulooyinka Uurjire iyo Xumays oo hoostaga Degmada Rako ee gobolka Karkaar ayaa waxaa shalay gelinkii danbe llaa xalay ka dhacay dagaalo xoogan oo geystay dhimasho iyo dhaawac fara badan.
Inta la ogyahay 9 ayaa dhimatay in ka badan... War saxaafadeed: Dowladda Soomaaliya marna ma aqbalin mana taageerin dacwooyinka uu wado Peter King. Oct 3, 2011 Axad October, 2 2011: Mudanaha Aqalka Mareykanka ee Peter T. King, ahna Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha Amniga ayaa dhowaan ku shaaciyey boggiisa internet ka in Dowladda Soomaaliya ay taageereyso dacwadaha ka dhanka ah Muslimiinta ee uu wado. Dowladda Soomaaliya marnaba ma taageerin dacwadaha is-daba jooga ah ee uu ku dhawaaqay bishii Maarso. Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Abdiweli Mohamed Ali... Radio Allgedo/ Waraysiyo